Sawirro: Faysal Cali Waraabe oo Nairobi kula kulmay Gaas iyo Cumar C/rashiid + hadal heyn ka dhashay . - Jowhar somali news leader
Sawirro: Faysal Cali Waraabe oo Nairobi kula kulmay Gaas iyo Cumar C/rashiid + hadal heyn ka dhashay .
June 22 (Jowhar.com)- Gudoomiyaba xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa la kulmay Madaxweynihii hore ee Puntland C/weli Gaas, Ra’iisalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid & Ra’iisalwasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan M. Xirsi oo kamid ahaa musharraxiintii Madaxweyne ee Soomaaliya.
Illaa hadda Xisbiga UCID faahfaahin kama bixin ujeedada kulankan oo Kenya ka dhacay sida caadiga ahna Faysal markasta ayuu la kulma Madaxda dawladda Soomaaliya balse cidna uma sheego natiijada kulamadiisa.
Dadka ku dhaqan Somaliland ayaa si aada u hadal haya kulankan oo ku soo aaday xili xaaaasi ah, maadaama muran ka dhashay daaha doorashada uu ka taagan yahay Hargeysa, iyadok Hargeysa iyo magaalooyinka kale lagu xiro dhalinyarafa Somaliland ee isku soo sawirta mas’uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaalida.
Somaliland oo sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka go’day sanadkii 1991 ayaa si iskeed ah isu xukumeysay 30-kii sano ee la soo dhaafay, majirto aqoonsi heer caalami ah iyo gobolka oo ay adduunka ka heshay, maadaama loo aqoonsanyahay dowlad goboleed ka tirsan Soomaaliya.